Waan Hin Hafne Itti qophaa’amuu Qabu! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooWaan Hin Hafne Itti qophaa’amuu Qabu!
Damee Boruu: Muddee 18, 2020
Yaroo rakkoo keessa jiran halkan tokko iyyuu nama barii’uu didee ni dheerata. Haa tahu malee lafti barii’ee biiftuun bahuun waan hafu miti.Ummatni qabsoo irra jirus akkuma kana cinqii diinni irraan gahuun muddame guyyaa bilisa bahuee eegachaa ciniisfataa jiraata. Guyyaa guyyaan saamamuun, waxalamuun, hidhamuun, ajjeefamuu fi walii gala gidirfamuun guyyaan garbummaa jalatti dabarsu dheeraa tahee itti dhaga’ama. Waan hin dabarre hin jiru guyyaan cinqii kunis ni darba. Waan har’a keessa jirru dagannee kan dhaloota Oromoo boru bilisa tahuuf barbaachis yaaduu qabna. Daloota boruuf yoo yaadne malee kosiin akka OPDO yaada bareedaa kamuu hojii irra oolchitti jedhanii eegachuun abdii hin qabu.
Gadaan Gadaaa Xumura Garbummaa Ti!
Qixxeessaa Lammii | Amajjii 05, 2018 Bara 2017 seenaa ajaa’ibaan dabarsinee bara 2018 seenaa haarayaan…